शाहरुखको प्यारमा करण ?- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
शाहरुखको प्यारमा करण ?
माघ ५, २०७३ एजेन्सी
बलिउडमा करण जोहर जति फिल्म निर्माणलाई लिएर चर्चित छन्, उति नै उनको सम्बन्धलाई लिएर । चर्चित टीभी टक सो ‘कफी विथ करण’ का होस्ट करण पुरुष सेलिब्रिटीसँग पनि प्रेमिल झुकाव राख्छन् । जसले गर्दा उनी बेला बखत चर्चाको केन्द्रमा आइपुग्छन् ।
यतिबेला उनको एउटा भनाइले फेरि एकपटक गसिपमा छाएका छन् । करण जोहरले वर्षको सुरुवातमा ल्याएको पुस्तक ‘एन अनसुटेबल ब्वाई’ ले यतिबेला धेरै निजी कहानी र रोचक घटनाहरूको पर्दाफास गरिदिएको छ । जसले गर्दा पुस्तक र लेखक दुवै हिट भइरहेका छन् । सोमबार साँझ पुस्तक सार्वजनिक समारोहमा उपस्थित करणले शाहरुखसँगको निकट सम्बन्धबारे खुलासा मात्रै गरेनन्, अब उप्रान्त पिता बन्न चाहेको पनि बताए । ‘जब म आफ्नो पिता यश जोहरको फिल्म कारोबारलाई भर्खरभर्खर बुझ्न थालेको थिएँ, त्यो बेला पितासँगै म ‘डुप्लिकेट’ फिल्मको स्क्रिप्ट बोकेर शाहरुखको घर पुगेको थिएँ । शाहरूखको मेरो पिताप्रतिको आदर र सम्मान देखेर नै म पग्लिएको थिएँ । त्यो अनुभूति मेरोलाई अद्भुत खालको थियो । त्यसै बेलादेखि नै शाहरुखसँग मेरो माया बसेको हो,’ करण जोहरले भने ।
तर करण र शाहरुखको प्रेममा समयसमयमा अवरोध पनि नआएको हैन । बीचमा केही समय त दुवैबीच बोलचालसम्म पनि भएन । पछि नायिका दिपीका पादुकोणले राखेको एक पार्टीमा दुवैबीच सौहार्दपूर्ण भेट भयो र सम्बन्धले पुन: निरन्तरता पाएको थियो । ‘सबै सम्बन्धमा उतारचढाव भन्ने हुन्छ । हामी पनि डिप लभमा थियौं । म उनलाई आदर गर्छु । यो सम्बन्ध, यो नाता सधैंका लागि कायम रहनेछ,’ करणले शाहरुखप्रति माया दर्साउँदै थपे । शाहरुखले पनि आफूलाई करणले राम्रोसँग बुझेको जिकिर गरे । ‘करण यस्ता मान्छे हुन् जो मलाई राम्रोसँग बुझेका छन् । उनीसँग म घन्टौं कुरा गर्न सक्छु,’ पुस्तक विमोचनमा उपस्थित शाहरुखले भने । करणले पुस्तकको एउटा च्याप्टर नै शाहरुखका लागि खर्चेका छन् ।
प्रकाशित : माघ ५, २०७३ ०९:२५
प्रज्ञाको बजेट १५ करोड
माघ ५, २०७३ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं — नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मंगलबार राजधानीमा सम्पन्न ३१औं प्राज्ञ सभाले चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ ।
प्राज्ञ सभाको उद्घाटन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संस्कृति जर्गेना गर्न प्राज्ञिक वर्गको भूमिका अहम् हुने बताए । ‘यसलाई राजनीति गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्नुहुन्न,’ प्रतिष्ठानको संरक्षकसमेत रहेका मन्त्री शाहीले भने । सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन नगरी ललितकला, संगीत तथा नाटय, विज्ञान प्रविधि र नेपाल प्रज्ञा गरी चार संरचना बनाएकाले आर्थिक संकट बेहोर्नुपरेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले बताए । ‘सरकारको मात्र भर परेर हुन्न,’ उनले भने, ‘संगठनात्मक समझदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा पनि जोड दिनुपर्छ ।’
प्रतिष्ठानले भारत, चीन र बंगलादेशका प्राज्ञिक निकायसँग समझदारी गरिसकेको र पाकिस्तान र श्रीलंकासँग छलफल भइरहेको पनि उनले सुनाए । साथै, प्रतिष्ठानको हिरक जयन्तीका अवसरमा राष्ट्रियस्तरको वाङ्मय सम्मेलन र पूर्वको विराटनगर र पश्चिमको नेपालगञ्जमा क्षेत्रीय सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले खुलाए ।
नेपालमा जैविक र भौगोलिक विविधता मात्र नभई संस्कृतिमा पनि विविधता भएको मुलुकको रूपमा प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति एवं वरिष्ठ साहित्यकार बैरागी काइँलाले व्याख्या गरे । सार्क क्षेत्रमा नेपाली संस्कृतिको विस्तारका लागि अभियान चलाउने सांस्कृतिक र प्राज्ञिक संस्थालाई सरकारले टेवा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । संगीत तथा नाटय प्रतिष्ठानका कुलपति सरुभक्तले संस्कृतिको क्षेत्रमा सरकारले विशेष रूपमा महत्त्व दिनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विष्णुविभु घिमिरेलगायतले धारणा राखे । सभाले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को बजेट अनुमोदन गर्नुका साथै चालू आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि १५ करोड बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रतिष्ठानको कर्मचारी तथा कलाकार नियमावली, आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावलीमा पनि आवश्यक संशोधन गरेको छ । प्रतिष्ठानले प्राज्ञ सभा सदस्यमा साहित्यकार झमककुमारी घिमिरे र गोपाल पोखरेल नियुक्त गरेको छ । लामो समयदेखि रिक्त स्थानमा यी दुई स्रष्टा आएका हुन् ।
प्राज्ञ सभा सदस्य लोकबहादुर थापाले राजीनामा दिएर र पुष्कर थाम्सुङको निधन भएर दुई स्थान रिक्त हुन आएका थिए ।